Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku socda magaca AU oo gaaray Garbaharrey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku socda magaca AU oo gaaray Garbaharrey
Garbahaarrey – Mareeg.com: Ciidamo Itoobiyaan ah oo wata astaanta AMISOM ayaa gaaray magaalada Garbahaarrey ee gobolka Gedo, sida ay sheegayaan weriyaasha ku sugan gobolkaas.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Garbahaarrey, ciidmao Itoobiyaan ah oo wata ilaa 40 gaadiidka dagaalka oo kal duwan ayaa maanta tagay degmadaas, halkaas oo ay ka sameysteen fariisimo ciidan.
Magaalada Garbahaarrey waxaa horay u jooga ciidamada Itoobiya, kuwaasoo aan ka tirsaneyn AMISOM, waxeyna garab siinayeen ciidamada taabacsan dowladda ee halkaas ku sugnaa.
Horraantii sannadkan ayay ahayd markii ciidamada Itoobiya ay si rasmi ah uga mid noqdeen howgalka AMISOM, iyagoo lagu wareejiyay inay sugaan amniga gobollada Bay, Bakool iyo Gedo.
Dhinaca kale, magaalada Baardheere oo ka tirsan gobolka Gedo oo Alshabaab maamusho ayaa waxaa ka dhacay debadbax looga horjeedo ciidamada Itoobiya.
Saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo uu ka mid yahay Sheekh Fu’aad Maxamed Khalaf oo halkaas khudbado ka jeediyay ayaa iclaamiyay dagaal ka dhan ah ciidamada Itoobiya ee ku biiray AMISOM.
Todobaadyadii lasoo haafay ayaa ciidamada Itoobiya ku qululayeen gobollo ka tirsan Soomaaliya, iyagoo wata calaamadda Midowga Afrika, waxaana taa barbar socday dhaqdhaqaaq ay wadaan Alshabaab iyo wacyigelin ay siinayaan dadka ku nool deegaanada ay maamulaan.